Etsy Antaninarenina… : handray vahiny maro ny Andro eran-tanin’ny Jazz | NewsMada
Etsy Antaninarenina… : handray vahiny maro ny Andro eran-tanin’ny Jazz
Toy ny isan-taona, tato anatin’ny fotoana vitsivitsy izay, anisan’ireo hanamarika amin’ny fomba manetriketrika ny Andro eran-tany ho an’ny mozika jazz isika eto Madagasikara. Marobe ireo mpikarakara hetsika, fikambanana, mpanakanto, sns, hiara-hiisalahy amin’ny fikarakarana fety ho fanamarihana izany.
Anisan’ireny ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), mandray anjara amin’ny fanomanana sy fanohanana ny fampisehoana etsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina, ny asabotsy 30 avrily izao. Fantatra fa ho maro ny mpitendry sy mpihira hanafana ny « podium » eny an-toerana. Tsy avy eto Madagasikara ihany izy ireo fa ao koa ny vahiny avy any atsimon’i Etazonia, izay manana fototra avy aty Afrika.
Miara-miasa amin’ny Ortana amin’ity hetsika ity ny minisiteran’ny Fizahantany, ny fitaterana ary ny famantarana ny toetry ny andro, ny kaominina Antananarivo Renivohitra ary ny Unesco*. Ankoatra ny eny Antaninarenina, inoana fa mbola hisy foibe ara-kolontsaina sy toerana hafa hanatontosa hetsika ho fanamarihana ity Andro eran-tany ho an’ny mozika jazz, izay mifamatotra amin’ny tantaran’ny fikatsahana ny fahafahana, ity.
*Unesco : Sampan’ny Firenena mikambana misahana ny fanabeazana, ny kolontsaina ary ny siansa.